> Resource > Android > Sida loo Download Adobe Reader u Android
Akhristaha Adobe waa PDF siladda ah xunna loogu talagalay oo lacag la'aan ah. Haddii aad hesho isticmaalka akhriyo PDF files on kiniin Android ama telefoon, waa lagama maarmaan in ay faylka APK akhristaha adobe rakibay it on. Si aad u soo bixi Adobe Reader u Android, waxaad isku dayi kartaa this xirfad Tababaraha Android - Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Tababaraha Tani Android ka dhigayaa si ay soo jiidasho leh dejisan iyo rakibi Adobe Reader on kiniin Android ama telefoon fudud.
Isku day oo qabaal ku Android inay leeyihiin Adobe Reader u Android bixi.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta baar hage hoos ku qoran, waxaad eegi kartaa telefoonka taageeray Android ama kiniin halkan .
Hadda, rakibi Tababaraha this Android on your computer. Waxaa Launch oo aad ka heli suuqa kala xiriir maamulaha Android ah.
Tallaabada 1. Connected aad kaniini ama Android phone in kombiyuutarka
Halkan waxa ku jira laba siyaabood oo si aad u hesho Android phone ama kiniin ku xiran. Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan cable USB Timid phone Android ama kiniin ah. Kale waa in la sameeyo xiriir via Wi-Fi. Marka la isticmaalayo Wi-Fi conneciton, ugu horreeya oo dhan, waa in aad la soo baxdo iyo rakibi file MobileGo.apk ah ee aad taleefan Android ama kiniin.
Marka aad telefoon Android ama kiniin xiran yahay, tababaraha this Android waxaa lagu ogaan doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Ka dib markii in, waxaad ka arki kartaa info oo dhan ku saabsan telefoonka Android ama kiniin uu furmo suuqa hoose kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Adobe Reader download u Android
Tiirka-bidixda ah ee kore, guji "Google Play App" si ay u muujiyaan dukaanka app Google on Murayaad saxda ah. Ra'yiga "Adobe Reader" sanduuqa raadinta. Raadi waxa ku jira natiijada baadhi ah oo taga si ay suuqa kala faahfaahsan oo guji "rakib". Markaas, sida aad ka arki, tababaraha this Android uu bilaabo inuu kala soo bixi Adobe Reader.
Dhinaca geeska bidix ee hoose, guji "Downloads". Daaqadda pop-up ka, waxaad eegi kartaa habka dajinta. Marka lagu sameeyey, Adobe Reader si toos ah rakibi doonaa on kiniin Android ama telefoonka, iyo sidoo kale badbaadiyey on your computer.
Bal eeg, waxaa kaliya fud inaad kala soo baxdo Adobe Reader loox Andoid ama telefoonka, iyadoo tababare tan Android - MobileGo for Android. Ka sokow Adobe Reader, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa Adobe Flash Player, Temple Run, iyo kulan dheeraad ah oo kulul. Haddii aad soo ururiyay websites app caan ah oo badan, sida AppBrain, waxaad riixi kartaa iskutallaabta ku darto websites in ay column ka tagay iyo download barnaamijyadooda aad jeceshahay in aad telefoon ama Android kiniin.
Isku day MobileGo for Android inaad kala soo baxdo Adobe Reader u Android hadda!
Sidee si ay u gudbiyaan Messages ka Samsung in Samsung
Sida loo dhoofiyo Muuqaalka Xiriirada in Gmail